ဂိမ်းများကိုလက်တွေ့ကျကျဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံအတွက်စိတ် ၀ င်စားမှုကိုယူဆောင်လာသည်
သငျသညျဝဘ်ပေါ်တွင်ရှာတှေ့နိုငျအခမဲ့လိင်ဂိမ်း၏အပူဆုံးစုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူလာမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အားလံုးသိၿပီးသားျဖစ္လို႔ပါ။ ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းဂိမ်းနယ်ပယ်နှစ်ခုလုံးနှင့်အွန်လိုင်းအခြားအရွယ်ရောက်ပြီးသူအတွက်ဤမျှလောက်များစွာသောဆိုဒ်များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြရတယ်။ ဒီစီမံကိန်းဟာအခုအချိန်အထိလုပ်ဆောင်နေတဲ့အကောင်းဆုံးစီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့လူတိုင်းအထင်ကြီးလိမ့်မည်ဟုအမာခံလိင်ဂိမ်းတစ်ခုစုဆောင်းမှုအတူတကွထားရန်စီမံခန့်ခွဲ။ လူတိုင်းမှာလိုအပ်တာတွေရှိတာကြောင့်ပါ။ မတူကွဲပြားမှု! သင့်မှာမျိုးနွယ်စုတွေ၊တခြားလူတွေကသင့်ထက်အမျိုးစုံရှိတယ်။, သင်တို့မူကားထွက်ရှိညစ်ညမ်းအပေါငျးတို့သအဓိကအမျိုးအစားများကိုဖုံးလွှမ်းနေတဲ့စုဆောင်းမှုရှိသည်အခါ,သင်ကစားခြင်းနှင့်သင်အံတုစေရန်အရေးယူဖို့အမှုအရာထဲကပြေးဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အတွက်,သင်အင်တာနက်ကိုပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်သောအများဆုံးပြင်းထန်သောအပြန်အလှန်လိင်လှုပ်ရှားမှုတွေ့လိမ့်မည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအခြားအခမဲ့ဆိုဒ်များပေါ်တွင်ရှာတွေ့ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်ကဲ့သို့ကြောက်မက်ဘွယ်လိင်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံအတွက်လိုအပ်သမျှရှိသည်။ ဤသည်အခမဲ့သင်တို့ဆီသို့လာကြောင်းအခြေခံအားဖြင့်ပရီမီယံညစ်ညမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ဆိုတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ပူးတွဲပါဝှက်ထားသောလှည့်ကွက်များသို့မဟုတ်ကြိုးမရှိပါ။ ဒါဟာညစ်ညမ်းပြွန်လိင်ရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းပြောင်းလဲသွားတယ်တူညီသောလမ်းအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားခြင်းစက်မှုလုပ်ငန်းပြောင်းလဲဖို့လိုလားတဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်အွန်လိုင်းဂိမ်းအကြောင်းကိုအရာအားလုံးပါပဲ။
ဒီဆိုဒ္မွာလုပ္ခဲ႔တဲ႔ အေကာင္းဆံုးအရာေတြထဲကတစ္ခုကေတာ့သင္ခံစားခ်င္တဲ႔ အမ်ိဳးအစားအားလံုးနဲ႔ လာတဲ႔ စုစည္းမႈတစ္ခုကိုစုစည္းထားဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကျနော်တို့ကြီးတွေညစ်ညမ်းပြွန်ကကမ်းလှမ်းအရာအားလုံးရှိသည်မသာ,ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သူတို့များသောအားဖြင့်မထိကြဘူးအမျိုးအစားများရှိသည်။ လူတိုင်းလိုချင်သောဂိမ်းအားလုံးရှိသည်။ ဒါပေမယ့်လည်းဆိုက်မှာရှားပါးတဲ့မျိုးနွယ်စုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်း၏ကြှနျတေျာ့အပိုင်းခြေကစားဂိမ်း,ကိုယ်ဝန်ညစ်ညမ်းဂိမ်းများနှင့်ပင်အချို့အမာခံမုဒိမ်းမှုအခန်းကဏ္ဍကစားစိတ်ကူးယဉ်အတူလာမယ့်။, ကျနော်တို့ကဒီမှာရှားပါးစိတ်ထိန်းချုပ်မှုဂိမ်းများနှင့်အင်တာနက်ကိုပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်ဂိမ်း၏အကြီးမားဆုံးလိမ်ညာစုဆောင်းမှုတစ်ခုရှိသည်။
ထက်,ငါတို့သည်ဤဆိုဒ်တွင်ဤမျှလောက်များစွာသောရုပ်ပြောင်ဂိမ်းရှိသည်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောကမ်ဘာပျေါတှငျ,အဲလျဆာသို့မဟုတ်မိသားစုကောင်လေး၏အားလုံးအမေ,ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကာတွန်းသားငယ်များ,ချော့မော့နိုင်သည့်အတွက်ဂိမ်းတွေ့လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့တြန္းဂိမ်းများနှင့်အတူရေကူးဝတ်စုံနဲ့ကနေကမ္ဘာ့၊ညဦး၊တစျအပိုင်းအစနှင့်ဇိမ်ခံ။ ကျနော်တို့တောင်မှသူတို့ကိုကျော်ကြားစေကြောင်းအခန်းကဏ္ဍအတွက်ကျော်ကြားမင်းသမီးနှင့်အတူဂိမ်းများ,ထိုကဲ့သို့သောကမ္ဘာ၏ဂိမ်းအဖြစ်,ညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်စစ်ပွဲများဂိမ်းများနှင့်အများကြီးပို. အခုဆိုက်ပေါ်မှာရေပန်းစားနေတဲ့အရာတွေကတော့ဟော်ကီဘောက်စ်အသိုင်းဝိုင်းအတွက်အားလုံးရဲ့စိတ်ကြိုက်ကစားနည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ လာကြနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ညစ်ညူးစိတ်ကူးယဉ်ပျော်မွေ့။
အသစ္အသစ္ေသာအခ်စ္ဇာတ္ၾကမ္းေတြကိုေန႕စဥ္ၾကည္႕ရွုဖို႕ ခ်န္နယ္ျမန္မာေဒါ႕အြန္လိုင္းကိုသြားၾကပါစို႕....။ ဤမျှလောက်များစွာသောကိရိယာများပေါ်တွင်ပျော်မွေ့နိုင်သောဂိမ်းများနှင့်အတူစစ်မှန်သောလက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်းဂိမ်း၏ခေတ်ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင်အသုံးပြုသောအရာကိုနေသမျှကာလပတ်လုံးကတက်-နေ့စွဲဘရောက်ဇာကိုပြေးနိုင်သကဲ့သို့,ဒါကြောင့်သင်ကအကောင်းဆုံးဂိမ်းအတွေ့အကြုံကိုပေးနိုင်ပါသည်။ သင်၏ကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာ(သို့)မက်ကရယ်မှအွန်လိုင်းဂိမ်းများကိုကစားနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးအိုင်ဖုန်း၊အိုင်ဖုန်းနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်များမှလည်းအန်းဒရွိုက်တွင်ပြေးလွှားကစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းသင်တို့ဆီသို့လာမယ့်အပေါ်ဆိုက်ကိုလည်းရက်စွဲအထိနှင့်အံ့သြဖွယ်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုပူဇော်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးမကျသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်ကြည့်ရှုခြင်းကိရိယာများသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များသည်စနစ်တကျအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဘယ်သူမျှမစိုးရိမ်ရှိပါတယ်။ တတိယပါတီပလက်ဖောင်းရန်သင့်အားပေးပို့ရန်မလင့်များရှိပါတယ်ကျနော်တို့အားလုံးသင့်ရဲ့ကြံ့ယူနှင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိနေရာတိုင်းတက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကြော်ငြာတွေနှင့်အတူသင့်ရဲ့စနစ်အလွဲသုံးစားဘယ်တော့မှမ။ က်ေနာ္တို႔မွာေျပာစရာေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒါကြောင့်,လာနှင့်ကမ်ဘာပျေါတှငျကမ်ဘာပျေါတှငျမှော်၏ဤလောကကိုစူးစမ်း။